प्रेममा नै सबै समस्याको समाधान छ ! – हाम्राे गोरखा » प्रेममा नै सबै समस्याको समाधान छ !
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:२९
सजना गुरुङ, इजरायल
प्रेम ! यो शब्द आँफैमा अर्थपूर्ण , अनमोल र बिशाल छ ! निसन्देह हामी सबै प्रेम शब्दको भावसँग परिचित छौ ! यही प्रेमको निश्चल छहरीमा मानब जीवन जिउछ ! मानब सम्बन्ध सुमधुर बन्दछ ! परिवार, समाज, देश र विश्व नै सुन्दर र शान्तिमय बन्न पुग्दछ ! यो दुई अक्षरको संयोगले बनेको प्रेममा नै संसार अडिएको छ ! हरेक सम्बन्धले सार्थकता प्राप्त गरेको छ ! पवित्र बाइबल नयाँ करार पहिलो कोरिन्थिको तेह्रौं अध्यायमा प्रेमलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ,” मैले मानिसहरु र स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने, म हल्ला मच्चाउने घण्टा र झ्याइँ ?झ्याइँ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु ! मसँग अगम्बाणी बोल्ने शक्ती होला, सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरु बुझ्न सकुँला र पहाडहरु हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला तर म मा प्रेम चाँही छैन भने म केही पनि होइन ! प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ ! प्रेमले डाह कहिल्यै गर्दैन, न शेखी नै गर्छ । प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को पनि मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन । प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठीक कुरामा रमाउछ । प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ । त्यसकारण प्रेम उत्कृष्ट छ । ” यी वाक्यहरुलाई गहिरिएर सोंच्ने हो भने हामी सजिलै बुझ्न सक्छौ प्रेमको सही परिभाषा ! दुई अपरिचित नर र नारीलाई बैबाहिक सम्बन्धमा बाँधेर एकअर्कामा समर्पित बन्न प्रेमले सिकाउदछ, एकअर्कासँग इमान्दारी बनी, एकर्काको नजरमा विश्वासको पात्र बन्दै आशा र हिम्मतका साथमा जिन्दगीमा आइपरेका सारा दु:ख र समस्याहरुको सामना गर्दै दाम्पत्य जीवनरथ अगाडि बढाउनलाई पनि प्रेमको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । हरेक सम्बन्धसँग प्रेमको फरक अनुभुती आभास गर्न सक्छौ । लोग्ने स्वास्नीबिचको प्रेम, माता पिता र सन्तान बिचको प्रेम, साथी साथी बिचको प्रेम, गुरु र शिष्य बिचको प्रेम यस्तै यस्तै धेरै धेरै सम्बन्धहरु बिचको प्रेम ।
जहाँ प्रेम छ त्यहाँ प्रतिसोध, क्रोध, घमन्ड र रिसरागको कुनै ठाउँ हुँदैन ! जहाँ प्रेम छ त्यहाँ दया माया को बिशाल सागर छ, इमान्दारिता जीवित छ, सदभाव र सहयोगको मुहान छ, मानवता को सही परिचय छ, सन्तुष्टी र शान्तिको सुखद अनुभुती छ ! तर जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ प्रतिसोध छ, जुन प्रतिसोधको भावले एउटा मानिस र एउटा परिवार मात्र होइन समाज, देश र विश्वालाइनै तहस नहस पारीदिएको छ ! जहाँ प्रेम सुन्य छ त्यहाँ क्रोध भरिएको छ, जुन क्रोधले बिनाश र बर्बादी बाहेक आज सम्म केही दिएको छैन ! जहाँ प्रेम हुँदैन त्यहाँ अहंकारले राज्य गर्दछ, घमन्ड, अहंकार यी सबले मानव जीवनमा, मानव समाजमा, मानिस-मानिसबिच, राष्ट्र – राष्ट्रबीच लडाईं, झगडा, हत्या – हिंसा इत्यादी धेरै धेरै सास्तिमय परिस्थितीहरुको सृजना गरिदिएको छ ! प्रेम त्यो धागा हो जसले हरेक छरिएर रहेको सम्बन्धलाई एकै ठाउँमा उनेर एकतामा बाँधी राख्दछ अनन्त सम्मलाई ! प्रेम त्यो अन्मोल भाव हो जो अरुको दु:खमा सहनुभुति राख्दै असहायहरुलाई, असक्तहरुलाई सक्दो सहयोग गर्नका निम्ती निरन्तर प्रेरित गरिरहन्छ मानिसलाई । सबै महामानवहरुको ईतिहास पढ्ने र सुन्ने हो भने उहाँहरुभित्र रहेको अदभूत प्रेमले नै उहाँहरुलाई महान घोषित गरेको छ ! उहाँहरुको जन्मलाईनै सार्थक बनाइदिएको छ !
हामी धेरैले पढेका र सुनेका छौ मदर टेरेसाको बारेमा,जय हेनरी ड्युनाको बारेमा, महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा , पृथ्बी नारायण शाहको बारेमा र महात्मा गान्धिको बारेमा,यस्तै धेरै समाजसेवी र देशप्रेमिहरुको बारेमा ! प्रेमले मानिसलाई त्यती असल र गुनी बनाउछ कि जसको तुलना हामी भगवानसँग गर्ने गर्छौ र प्रेमबिनको मानिस त्यती खराब र दुस्त हुन्छ कि जसलाई हामी शैतान को कुसंज्ञा दिन्छौ ! यदी देशनायक अर्थात हाम्रो देशको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि देशसँग, जनता अर्थात देशबासिसँग महात्मा गान्धिले जस्तै निस्वार्थ प्रेम गरिदिएको भए आज हाम्रो देश, हाम्रो मातृभूमी, हाम्री जननी स्वार्थ, प्रतिसोध र क्रोधरुपी बमबारुदद्वारा यसरी घाइते हुने थीइनन ! असुरक्षा, अशान्ति, डर र त्रासले यसरी ग्रसित हुने थिइनन ! देश घाइते हुनु भनेको हामी घाइते हुनु हो, देशको अस्तित्व मेटिनु भनेको हाम्रो अस्तित्व मेटिनु हो ! देशको भविष्यलाई हत्केलामा लिएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हरेकले देशलाई र जनतालाई प्रेम गरेको होस,निस्वार्थ प्रेम ! जुन प्रेमले एक सच्चा र इमान्दारी राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र नायक, राष्ट्र उपासक बनाएर देशको अस्मिता जोगाउन प्रेरित गर्नेछ ! जनताका विश्वाश, आशा र सपनाहरुलाई साकार रुप दिनेछ !
हामीसबै एकअर्कासँग पवित्र प्रेम गरौ, प्रतिसोधलाई भुलेर ! एकर्काको गल्तिहरुलाई माफि दिएर ! रिसरागको अवशेषहरुलाई मेटेर ! घमन्डको घाटी रेटेर ! किनकी प्रेममा नै सबै समस्याको समाधान छ ! प्रेममा नै मनको सन्तष्टी र आत्माको शान्ती छ !!!
प्राण त्याग्न सरल तर भाषा त्याग्न कठिन ! : विजय थापा